Muxuu Sheekh Shariif ka yiri askartii loo qaaday Eritrea? | KEYDMEDIA ONLINE
Muxuu Sheekh Shariif ka yiri askartii loo qaaday Eritrea?
Waxaa so badanaya baaqyada ku aaddan in Farmaajo iyo kooxdiisu caddeeyaan arrinta ciidamadii loo qaaday Eritrea, kadibna laga dagaal galiyay waqooyiga Itoobiya, Sheekh Shariif, ayaa ku soo biiray dadka ku talinaya in Fahad iyo Farmaajo arrintaan lagala xisaabtamo.
MUQDISHO, Somaaliya - Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay warbixinta ergeyga gaarka ah ee QM u qaabilsan arrimaha xuquuqul Insaanka ee ka hadlaysa xaaladda askarta Soomaalida ee loo qaadey Eritrea, taas oo sheegeysa in ay ku lug yeesheen dagaalkii Itoobiya.
Wuxuu dalbaday in baaritaan lagu sameeyo arrinkaan, Xukuumadda Xil-gaarsiinta ee Rooble hoggaamiyo ayuuna ugu baaqay in la hadasho waalidiinta.
“Waxaan ku baaqeynaa in baaritaan madax banaan lagu sameeyo halkii ay ku dambeeyeen dhalinyaradaas, iyadoo aan Xukuumadda usoo jeedinayno inay ka jawaabto baaqyada waalidiinta ubadkoodu maqan yihiin”. Ayuu yiri Sheekh Shariif.
MW Shariif, wuxuu sheegay inu walwalka la qaybsanayo waalidiinta iyo ehelka dhalinyaradaas la la’yahay, wuxuuna ku baaqay in arintaan mas’uuliyaddeeda lagula xisaabtamo Madaxda Dowladda ee ka dambeeyey falkaas foosha xun.
Warbixin shalay ka soo baxay Golaha Xuquuqul Insaanka ee Hay’adda Qamadada Midoobay, ayaa lagu sheegay in ciidamada Soomaalida laga qaaday xeryaha ay tabobarka ku qaadanayeen lana geeyay goobaha dagaalka ee Gobolka Tigray iyaga oo la socday ciidamada Ereteriya.
Nidaamka Farmaajo ee waqtigiisu dhacay ayaa geed dheer iyo mid gaaban u koray sidii ay u marin habaabin lahaayeen sax ahaanshiyaha arrinkaan, waxayna dhowr jeer oo kala duwan ku celceliyeen in aysan jirin ciidamo tababar loo qaaday oo ka dagaalamay Itoobiya.